Daniely 13 - Ny Baiboly
Daniely toko 13
5Tamin'izay taona izay, dia notendrena ho mpitsara ny loholona roa lahy tamin'ny vahoaka; ireo no nitenenan'ny Mpampianatra nataony hoe: Ireo anti-dahy, izay mpitsara ka toa mitondra ny vahoaka, no nivoahan'ny faharatsiana avy ao Babilona. 6Ao an-tranon'i Joakima no falehan'izy ireo, ary ny olona rehetra manan'ady dia manatona azy. 7Tokony ho amin'ny misasak'andro, rahefa lasa ny vahoaka, Sozana kosa niditra tao anatin'ny zaridain'ny lahy ka nitsangatsangana tao. 8Hitan'ireto anti-dahy roa lahy izy, niditra sy nitsangatsangana ao isan'andro, ka velom-panirian-dratsy azy mafy izy ireo: 9nosimbany ny sainy ary naviliny tsy hahita ny lanitra ny masony sy tsy hahatsiaro izay fitsarana marin'Andriamanitra. 10Koa samy voan'ny fitiavana an-drazazavavy izy ireo, kanefa tsy nifampilaza ny fijaliana mafy nanjo azy; 11satria samy menatra izy ireo ny hifamosaka ny filan-dratsy nitaona azy hiaraka amin-drazazavavy. 12Nitsikilo fatratra an-drazazavavy isan'andro ny masony hahitany azy, dia nifampilaza hoe: 13Andeha hody isika, fa fotoana fisakafoanana izao. Dia nivoaka samy naningana izy. 14Kanjo tafaverina indray izy ireo ka tafahoana, dia nifanontany ny antony iverenany eo, vao samy vaky milaza ity fanirian-dratsiny avy izy ireo, vao nifanaiky ny amin'ny fotoana mety hahitany azy mitokana.
15Eo am-pikendrena izay fotoana mety indrindra izy ireo indro Sozana niditra tao anaty zaridaina toy ny nataony omaly sy afakomaly, tsy narahan'ny olona hafa-tsy ankizivavy roa, fa te-handro tao anaty zaridaina izy, satria nafana ny andro. 16Tsy nisy olona tao, hafa-tsy iretsy anti-dahy niery sy nikendry azy. 17Dia hoy razazavavy tamin'ireo ankizivavy: Itondray diloilo manitra sy menaka fanosorana aho; ary hidio ny vavahadin'ny zaridaina fa handro aho. 18Nataon'ireo izay nasain'i Sozana nataony; ka nony voahidiny ny vavahadin'ny zaridaina dia nivoaka tamin'ny vavahady anankiray teo ivoho izy, haka ny zavatra nilaina tamin'izy ireo; tsy fantany fa miery ao anaty zaridaina iretsy anti-dahy. 19Vao lasa ireo ankizivavy, dia nitsangana izy roa lahy, nidodododo nankeo amin'i Sozana, ka nanao taminy hoe: 20Hitanao fa mihidy ny vavahadin'ny zaridaina, tsy misy mahita antsika, ary izahay mirehi-pitiavana anao; koe ekeo ny fanirianay, meteza mba ho anay. 21Fa raha mandà kosa hianao dia hitsangan-ko vavolombelona miampanga anao izahay, hilaza fa nisy tovolahy anankiray nomba anao ka izany no namerenanao an'ireo ankizivavy. 22Nisento Sozana ka nanao hoe: Latsaka an-katerena mafy aho avy hatraiza hatraiza: hanao izany moa aho, fahafatesana ho ahy izany; tsy hanao izany indray, tsy afa-mandositra ny tànanareo. 23Aleoko anefa tsy nanao ratsy azon'ny tànanareo; toy izay hanota eo anatrehan'ny Tompo. 24Dia niantso mafy izy; fa mba niantsoantso hamely azy koa, ireto anti-dahy; 25sady nihazakazaka namoha ny vavahadin'ny zaridaina ny iray amin'izy ireo. 26Vao nandre ny antsoantso avy any anaty saha ireo mpanompo tao an-trano, dia nidodododo niditra ny vavahady tao ivoho hizaha izay inona ao. 27Nony nilazalaza ny toe-draharaha ireto anti-dahy dia menatra mafy ireto mpanompo, fa tsy mbola nisy nilaza zavatra toy izany, ny amin'i Sozana, na iza na iza.
28Ny ampitson'iny, rahefa tafavory tao amin'i Joakima vadin'i Sozana ny vahoaka, dia tonga tao koa ireto anti-dahy roa lahy, efa feno hevi-dratsy hamelezana an-drazazavavy mba hahafaty azy. 29Hoy izy ireo teo anatrehan'ny vahoaka: Ampanalao Sozana, zanak'i Helkiasa sy vadin'i Joakima. Dia naniraka haka azy niaraka tamin'izay ny olona. 30Dia tonga razazavavy nomban'ny ray aman-dreniny sy ireo zanany lahy, ary ny havany rehetra. 31Fatratra ny endrik'i Sozana; ary tsara tarehy aoka izany izy. 32Nivoaly izy, nefa nasain'ireto mpitsara ratsy fanahy nesorina taminy ny voaliny, mba hilomanosany amin'ny hatsaran-tarehiny. 33Fa ny fianakaviany rehetra mbamin'izay nahalala azy kosa, nandatsa-dranomaso avokoa. 34Dia nitsangana teo afovoan'ny vahoaka ireto anti-dahy roa lahy, nametra-tànana tamin'ny lohan-drazazavavy; 35izy kosa, sady nitomany no niandrandra ny lanitra, satria natoky ny Tompo izy. 36Ary hoy ireto anti-dahy: Raha nitsangatsangana tao anaty zaridaina izahay dia honjohonjonay ihany, indro izy niditra, narahin'ankizivavy roa; ka nasainy nohidiana ny vavahadin'ny zaridaina dia naveriny ireo ankizivavy roa ireo. 37Ary nisy tovolahy anankiray efa namitsaka tao, nanatona azy, dia nanao ratsy taminy. 38Tao anjoron'ny zaridaina izahay, fa rahefa nahita izany heloka izany dia niroatra nankeo amin'izy ireo, ka tratranay tamin'izany fahavetavetana izany izy. 39Tsy azonay nosamborina ilay tovolahy, fa matanjaka noho izahay, ka novohany ny vavahady dia nitsoaka izy. 40Razazavavy kosa, nony azonay, nanontanianay hoe: iza iny tovolahy iny, nefa tsy nety nilaza taminay izy. Izany no filazanay marina. 41Nino izany ny be sy ny maro, satria anti-dahy ireo sady mpitsara ny vahoaka, ka dia noheloin'izy ireo ho faty razazavavy.
60Dia nihoraka mafy ny vahoaka rehetra tafavory, ary nisaotra an'Andriamanitra, fa mamonjy izay nanantena azy izy. 61Nony inona nitsangana izy ireo, hamely an'ireto anti-dahy roa lahy, izay nataon'i Daniely vaky lainga, araka ny teny naloaky ny vavany ihany ho miampanga tsy marina; ka ny ratsy notadiaviny hatao tamin'ny namany ihany, no nataony tamin'izy roa lahy, 62mba hahatanteraka ny lalàn'i Moizy; dia novonoiny ho faty izy ireo ary ny rà tsy manan-tsiny dia voavonjy tamin'izany andro izany. Nidera an'Andriamanitra noho ny amin'i Sozana zanany vavy. 63Helkiasa sy ny vadiny, mbamin'i Joakima vadin-drazazavavy, sy ny havany rehetra, satria tsy nahitana zava-mahafa-baraka kely akory razazavavy. 64Ary tonga nalaza teo anatrehan'ny vahoaka Daniely hatramin'izany andro izany, ka hatratý aorian'izany koa.
65Nony voaangona tany amin'ny razany, Astiaza mpanjaka, dia Syrosa, ilay Persa, no nandray ny fanjakana. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0611 seconds